၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (4 of 10)
၁၂- အာသေ၀နပစ္စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (4 of 10) zawgyi
သူမနာမည်က ပုဏ္ဏာ။ အနာထပိဏ်သူဌေးအိမ်မှာ ၁၀၀ ပြည့်မြောက်တဲ့ ကျွန်မလေးပါ။ ကျွန်တစ်ရာ ပြည့်လို့ သူ့ကို လွယ်လွယ်ပဲ နာမည်ပေးလိုက်တယ် ပုဏ္ဏာလို့။ မြန်မာလိုဆို မပြည့်စုံပေါ့။ နာမည်နဲ့တော့ သိပ်မဟပ်လှပါဘူး။ ပြည့်စုံဆိုပေမယ့် မျိုးရိုးက ကျွန်လေ။ ဒီတော့ သူဘယ်လောက်ကြိုးစား ကြိုးစား ချမ်းသာခွင့် မရှိသူပါ။ အနာထပိဏ်သူဌေးဆိုတာကလည်း သာမန်ဟုတ်ရိုးလား။ မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာ အလွန် နာမည်ကြီးသူပေါ့။ မပြည့်စုံလေးကို ရာပြည့်မှာမွေးလို့ မင်္ဂလာကို ယူဆောင်လာသူဟု သူဌေးကြီးက ယူဆ ထားတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မပြည့်စုံကို အလုပ်ခိုင်းတဲ့ နေရာမှာတောင် ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ အလုပ်တွေကို မခိုင်းပါဘူး။ တစ်အိမ်သားလုံး၏ သောက်သုံးရေကို ခပ်စေခဲ့ပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားနှင့်တကွ သံဃာတော် တွေကို သောက်ရေကပ်ဖို့ဆိုလည်း မပြည့်က တာဝန်ယူရပါတယ်။
မပင်ပန်းပေမယ့် အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ် နေတယ်လို့ မပြည့်စုံက နားလည်ထားပါတယ်။ နွေရာသီ မိုးရာသီတို့မှာ မနက်စောစော အစိရ၀တီမြစ်ကမ်းကို ရေခပ်သွားရတာ မခက်ခဲပေမယ့် ဆောင်း ရာသီဆို သူမအဖို့ အလွန်ခက်ခဲလှပါတယ်။ အေးစိမ့်နေတဲ့ ရာသီဥတုက အရိုးထဲထိအောင် နာကျင်လှပါတယ်။ ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းပေမယ့် သောက်သုံးရေဆိုတာ အမြဲလို အပ်တယ်လေ။ တစ်ရက်တစ်လေမှ နားမနေခဲ့ပါဘူး။
ဆောင်းမနက်တစ်ခုမှာ မပြည့်စုံလေး ရေခပ်သွားရင်း ကြာဖူးနားဝ တရားသဘောကို ဆင်ခြင်ပြီး အေးစိမ့်နေတဲ့ ဒဏ်ကို ဖြေဖျောက်ခဲ့ပါတယ်။ သဲသောင်ပြင်မှာ လျှောက်လှမ်းရတာဟာ အလွန်မှပင် သက်သာလှသော်လည်း မညီမညာလမ်းကို လျှောက်လှမ်းချိန်မှာတော့ အလွန်တရာမှပင် နာကျင်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခလုတ်တိုက်မိသွားရင် အသဲခိုက်အောင်ပင် နာကျင်မှုကို ခံစားလိုက်ပါတယ်။
အချိန်တန်၍ ရေမရှိရင် အဆူခံရမည်။ အရိုက်ခံရမည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်မှီ သောက်ရေရရှိရန် မြစ်သို့ စောစောပင် ထွက်လာခဲ့လေသည်။ မြစ်ဆိပ်တွင် လူတစ်ယောက်သည် အ၀တိမပါ ဗလာကျင်း၍ အအေးဒဏ် ခံနေသည်။ နှုတ်ခမ်းများမှာလည်း ပြာနေ၏။ တစ်ဆက်ဆက်တုန်နေသော လူကြီးသည် ကမ်းနားသို့လာ၏။ ထိုလူကြီးကို မြင်ဖူးသလို ရှိ၏။ သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ သာဝတ္ထိမြို့မှ ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်မှန်း သိလိုက်ရပါသည်။
သူမသည် အလိုလိုပင် အံ့အားသင့်သွားပါသည်။ ဒီလိုအချိန်မှာ အမိန့်မပါ စေခိုင်းသူကင်းတဲ့ သူ့လို ပုဂ္ဂိုလ် မျိုးက အဘယ့်ကြောင့် ဤနေရာမှာ လာပြီး ခိုက်ခိုက်တုန်ချမ်းတဲ့ ဒဏ်ကို ခံလေသနည်း။ အ၀တ်အစားများ ၀တ်ရုံပြီးသောအခါ မေးကြည့်မိပါတော့သည်။ “ ပုဏ္ဏားကြီး အရှင်သခင်တို့၏ ဆဲရေးခြင်း ရိုက်ပုတ်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အအေးဒဏ်ကို ခံကာ ရေကို မြစ်အတွင်းဆင်းကာ ခပ်ရ၏။ သင်သည်ကား မည်သူ့ကို ကြောက်၍ ရေထဲတွင် ဆင်းရပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် အအေးဒဏ်ကိုခံကာ စောစောစီးစီး ရေထဲတွင် ဆင်းပါသနည်း”ဟု မေးလေ၏။
ထိုအခါ ပုဏ္ဏားကြီးက “မိန်းကလေး ငါသည် မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့မိ၏။ ထိုမကောင်းမှုများ ကျေပျောက်စေရန် စောစောစီးစီး ရေချိုးခြင်းဖြစ်၏။ လောက၌ ငယ်သူဖြစ်ဖြစ် ကြီးသူဖြစ်ဖြစ် မကောင်းမှုပြုမိသော် ဤကဲ့သို့ စောစောစီးစီး ရေချိုးလိုက်ပါမူ ထိုမကောင်းမှုများသည် ကင်းစင်သွားလေပြီ”ဟု ပြောလေသည်။
ထိုအခါ လမ်းလွဲနေသော ပုဏ္ဏားကြီးအား မပြည့်စုံသည် သနားသွားမိပါသည်။ မိမိနားလည်သိရှိထားသော တရားသဘောများကိုလည်း ပြောပြချင်၏။ ထို့ကြောင့်ပင်….
“ပုဏ္ဏားကြီး မကောင်းမှုကို ရေဖြင့်ဆေးကြော၍ သန့်စင်လျှင် ငါး လိပ် မိကျောင်းတို့သည် အမြဲ စင်ကြယ် နေရာ၏။ သေလျှင်လည်း အကုန်နတ်ပြည် ရောက်ကုန်ရာ၏”
“ပုဏ္ဏားကြီး အကုသိုလ်ကို ရေဖြင့် ဆေးကြော၍ ရရိုးမှန်လျှင် ရေဆေးစဉ် ကုသိုလ်တရားတို့လည်း ရေဖြင့်သာ မျှောပါသွားကုန်ရာ၏”
“ပုဏ္ဏားကြီး သင်သည် မကောင်းမှုကို ကြောက်သဖြင့် နေ့စဉ်ရေချိုး၏။ အမှန်အားဖြင့် ထိုမကောင်းမှုသည် အကျိုးမပေးပဲ မနေ။ အကျိုးတဖန်ပေးလာပြန်မှု ဆင်းရဲရ၏။ အို…ပုဏ္ဏားကြီး မကောင်းမှုကို ကြောက်လျှင် မကောင်းမှုကို မပြုဘဲနေရာ၏” ဟု သဘာဝကျကျ ပြောလိုက်သည်။
ပုဏ္ဏားကြီးသည် မကောင်းမှု၏ စင်ကြယ်ပုံ လွတ်မြောက်ရပုံကို သဘာဝကျကျ ပြောပြသော သူမအား အထင်ကြီး လေးစားသွား၏။ ထို့ကြောင့် အပေါ်ရုံအ၀တ်လွှာတစ်ခုကို ပေး၏။ ကျွန်တစ်ယောက်အဖို့ အဖိုးတန်အ၀တ်အစားသည် မက်မောစရာပင်။ သို့သော် မပြည့်စုံက ငြင်းပယ်မှုကို ပြုခဲ့၏။ ပုဏ္ဏားကြီးသည် လေးစားသထက် ပို၍ လေးစားသွား၏။
ပြီးတော့ မပြည့်စုံက “ပုဏ္ဏားကြီး မကောင်းမှုကို ကြောက်ရိုးမှန်လျှင် ကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း မကောင်းမှုကို မပြုရာ။ မျက်မှောက်၌လည်းကောင်း မျက်ကွယ်၌ လည်းကောင်း မကောင်းမှုကို မပြုရာ။ မကောင်းမှုများကို ယခုသော်လည်းကောင်း၊ နောင်သော်လည်းကောင်း ပြုနေငြားအံ့။ ထိုမကောင်းမှုမှ လွတ်မြောက်မဟုတ်ပါ”ဟု ပြောဆိုလိုက်လေ၏။
ထိုအခါ ပုဏ္ဏားကြီးသည် ဤမိန်းကလေးသည်ပင် ဤမျှတတ်သိနားလည်နေပါမူ သူ့ဆရာကား ဆိုဖွယ်ရာ မရှိဟု တွေးဆကာ မြတ်စွာဘုရားအား ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်လေတော့၏။ သရဏဂုံတည်ကာ သီလတရားများ ကို ဆောက်တည်ကျင့်သုံးသော ဥပသကာအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားလေတော့၏။
ထိုသတင်းသည် သာဝတ္ထိ၌ ပြန့်နှံ့သွားလေတော့၏။ နာမည်ကျော် ပညာရှိ ပုဏ္ဏားကြီးအား အကျင့်မှန်ကန် စေအောင် ပြောဆိုဆုံးမလိုက်သော မပြည့်စုံ၏ ဂုဏ်ကား အနာထပိဏ်သူဌေး၏ နားသို့ပင် ကြားသိခဲ့ရလေ၏။ အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်းနှင့် မွေးဖွားလာသူ ဖြစ်သည်နှင့်အညီ မင်္ဂလာရှိသော အလုပ်ကို လုပ်ဆောင် သွားသော မပြည့်အား အနာထပိဏ်သူဌေးသည် ကျွန်အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ခြင်းဟူသော ဆုလာဘ်ကို ပေးလိုက် လေ၏။
သူ့ကျွန်အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ခြင်းသည် အတားအဆီး အပိတ်အပင် မရှိ။ သွားလိုက သွားနိုင်၏။ လာလိုက လာနိုင်၏။ ဘယ်သူမှ ကြောက်စရာ မလိုတော့ပေ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်၌ ကျွန်အား ရဟန်းပြု မပေးရဟု ၀ိနည်းပညတ်ချက် ရှိလေသည်။ အရှင်က ကျွန်အဖြစ်မှ လွှတ်ပေးသောအခါမှသာလျှင် ရဟန်းပြုခွင့် ရရှိလေ၏။ ခဏမဆိုင်းပင် နေအိမ်၌ သူဌေးကြီး နှင့်တကွ အဖေ အမေကို နှုတ်ဆက်ကာ ရဟန်းပြုရန် သွားကာ ဆံကေသာ အလှကို ပယ်စွန့်ကာ ရဟန်းမအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းလိုက်လေတော့၏။ တရားဘာဝနာကို ကြိုးစား ပွားများ အားထုတ်ရာ မကြာမီပင် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ဆိုက်လေတော့၏။
၀ိပဿီမြတ်စွာဘုရား၊ သိခီမြတ်စွာဘုရား၊ ဝေဿဘူမြတ်စွာဘုရား၊ ကကုသန်မြတ်စွာဘုရား၊ ကောဏာ ဂုဏ်မြတ်စွာဘုရား၊ ကဿပမြတ်စွာဘုရားတို့၏ သာသနာတော်တွင် ရဟန်းမအဖြစ်ဖြင့် စာသင်စာချ တရား ဟောခြင်းများကို လုပ်၍ ပါရမီဖြည့်ခဲ့သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလျက် သူမသည် အဘယ့်ကြောင့် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ရပါသနည်း။ (ဂေါ၊က၊ကော၊က၊ဝေ၊သိ၊၀ိ) ဘုရားခုနှစ်ဆူတည်း။
ဂေါတမဘုရားရှင် လက်ထက်တော်တွင် အာသဝေါကင်းကွာ ရဟန္တာဖြစ်မည့်သူ မှန်သော်လည်း သံသရာ ခရီးကို လျှောက်လှမ်းခဲ့စဉ် အမှားလုပ်ခဲ့မိသောကြောင့် ကျွန်မဘ၀သို့ ရောက်ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အမှားကား အခြားမဟုတ်။ မာနခက်ထန်ခြင်းတည်း။ မာန်မာန ခက်ထန်သူများသည် အမျိုးယုတ်၌ ဖြစ်တတ်လေ၏။ (ပုဏ္ဏာထေရီ ၀တ္ထု၊ ထေရီအပါဒါန်) ref; အရှင်ကောသလ၏ dhammadana website
အယူလွဲနေသည့်ပဏ္ဍိတ် ပညာရှိကြီး၏ နှလုံးသားထဲအထိ ရောက်ရှိစေနိုင်သည့် တရားစကားကို ကျွန်မလေး မပြည့်က ပြောနိုင်ခြင်းမှာ ဤဘ၀တစ်ခုတည်း၏ ဆည်းပူးလေ့လာခဲ့သည့် သတ္တိမဟုတ်ပေ။ ခြောက်ဆူသော ဘုရားရှင်တို့၏ လက်ထက်တော် အခါကာလက အဋ္ဌကထာဖွင့်နိုင်လောက်သည့်အထိ အထပ်ထပ် ထုံမွှမ်း လာခဲ့သည့်ဉာဏ်စွမ်းရည်၏သတ္တိ potential ပေတည်း။ ထို့ကြောင့် ဘ၀ခြားသော် လည်း ဖြစ်တည်ပျက် နာမသန္တတိအစဉ် Mental process တွင် အနန္တရ၊ သမနန္တရ၊ အာသေ၀န၊ နာနာ က္ခဏိကကမ္မ ပစ္စည်းတို့၏ ကျေးဇူးပြုခြင်းကြောင့် potential energy သတ္တိ အဖြစ်ပါ ၀င်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
၁၂- အာသဝေနပစ်စယော Āsevana Paccayo (Repetitive condition) (4 of 10) pyidaungsu – unicode
သူမနာမညျက ပုဏ်ဏာ။ အနာထပိဏျသူဌေးအိမျမှာ ၁၀၀ ပွညျ့မွောကျတဲ့ ကြှနျမလေးပါ။ ကြှနျတဈရာ ပွညျ့လို့ သူ့ကို လှယျလှယျပဲ နာမညျပေးလိုကျတယျ ပုဏ်ဏာလို့။ မွနျမာလိုဆို မပွညျ့စုံပေါ့။ နာမညျနဲ့တော့ သိပျမဟပျလှပါဘူး။ ပွညျ့စုံဆိုပမေယျ့ မြိုးရိုးက ကြှနျလေ။ ဒီတော့ သူဘယျလောကျကွိုးစား ကွိုးစား ခမျြးသာခှငျ့ မရှိသူပါ။ အနာထပိဏျသူဌေးဆိုတာကလညျး သာမနျဟုတျရိုးလား။ မွတျဗုဒ်ဓသာသနာမှာ အလှနျ နာမညျကွီးသူပေါ့။ မပွညျ့စုံလေးကို ရာပွညျ့မှာမှေးလို့ မင်ျဂလာကို ယူဆောငျလာသူဟု သူဌေးကွီးက ယူဆ ထားတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး မပွညျ့စုံကို အလုပျခိုငျးတဲ့ နရောမှာတောငျ ပငျပနျးလှနျးတဲ့ အလုပျတှကေို မခိုငျးပါဘူး။ တဈအိမျသားလုံး၏ သောကျသုံးရကေို ခပျစခေဲ့ပါတယျ။ မွတျစှာဘုရားနှငျ့တကှ သံဃာတျော တှကေို သောကျရကေပျဖို့ဆိုလညျး မပွညျ့က တာဝနျယူရပါတယျ။
မပငျပနျးပမေယျ့ အရေးကွီးတဲ့နရောမှာ အလုပျလုပျ နတေယျလို့ မပွညျ့စုံက နားလညျထားပါတယျ။ နှရောသီ မိုးရာသီတို့မှာ မနကျစောစော အစိရဝတီမွဈကမျးကို ရခေပျသှားရတာ မခကျခဲပမေယျ့ ဆောငျး ရာသီဆို သူမအဖို့ အလှနျခကျခဲလှပါတယျ။ အေးစိမျ့နတေဲ့ ရာသီဥတုက အရိုးထဲထိအောငျ နာကငျြလှပါတယျ။ ခိုကျခိုကျတုနျခမျြးပမေယျ့ သောကျသုံးရဆေိုတာ အမွဲလို အပျတယျလေ။ တဈရကျတဈလမှေ နားမနခေဲ့ပါဘူး။
ဆောငျးမနကျတဈခုမှာ မပွညျ့စုံလေး ရခေပျသှားရငျး ကွာဖူးနားဝ တရားသဘောကို ဆငျခွငျပွီး အေးစိမျ့နတေဲ့ ဒဏျကို ဖွဖြေောကျခဲ့ပါတယျ။ သဲသောငျပွငျမှာ လြှောကျလှမျးရတာဟာ အလှနျမှပငျ သကျသာလှသျောလညျး မညီမညာလမျးကို လြှောကျလှမျးခြိနျမှာတော့ အလှနျတရာမှပငျ နာကငျြရပါတယျ။ တဈခါတဈရံ ခလုတျတိုကျမိသှားရငျ အသဲခိုကျအောငျပငျ နာကငျြမှုကို ခံစားလိုကျပါတယျ။
အခြိနျတနျ၍ ရမေရှိရငျ အဆူခံရမညျ။ အရိုကျခံရမညျ။ ထို့ကွောငျ့ အခြိနျမှီ သောကျရရေရှိရနျ မွဈသို့ စောစောပငျ ထှကျလာခဲ့လသေညျ။ မွဈဆိပျတှငျ လူတဈယောကျသညျ အဝတိမပါ ဗလာကငျြး၍ အအေးဒဏျ ခံနသေညျ။ နှုတျခမျးမြားမှာလညျး ပွာနေ၏။ တဈဆကျဆကျတုနျနသေော လူကွီးသညျ ကမျးနားသို့လာ၏။ ထိုလူကွီးကို မွငျဖူးသလို ရှိ၏။ သခြောစဉျးစားကွညျ့တော့ သာဝတ်ထိမွို့မှ ထငျရှားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈယောကျဖွဈမှနျး သိလိုကျရပါသညျ။
သူမသညျ အလိုလိုပငျ အံ့အားသငျ့သှားပါသညျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ အမိနျ့မပါ စခေိုငျးသူကငျးတဲ့ သူ့လို ပုဂ်ဂိုလျ မြိုးက အဘယျ့ကွောငျ့ ဤနရောမှာ လာပွီး ခိုကျခိုကျတုနျခမျြးတဲ့ ဒဏျကို ခံလသေနညျး။ အဝတျအစားမြား ဝတျရုံပွီးသောအခါ မေးကွညျ့မိပါတော့သညျ။ “ ပုဏ်ဏားကွီး အရှငျသခငျတို့၏ ဆဲရေးခွငျး ရိုကျပုတျခွငျးဟူသော အကွောငျးကွောငျ့ ကြှနျုပျသညျ အအေးဒဏျကို ခံကာ ရကေို မွဈအတှငျးဆငျးကာ ခပျရ၏။ သငျသညျကား မညျသူ့ကို ကွောကျ၍ ရထေဲတှငျ ဆငျးရပါသနညျး။ အဘယျ့ကွောငျ့ အအေးဒဏျကိုခံကာ စောစောစီးစီး ရထေဲတှငျ ဆငျးပါသနညျး”ဟု မေးလေ၏။
ထိုအခါ ပုဏ်ဏားကွီးက “မိနျးကလေး ငါသညျ မကောငျးမှုကို ပွုခဲ့မိ၏။ ထိုမကောငျးမှုမြား ကပြေောကျစရေနျ စောစောစီးစီး ရခြေိုးခွငျးဖွဈ၏။ လောက၌ ငယျသူဖွဈဖွဈ ကွီးသူဖွဈဖွဈ မကောငျးမှုပွုမိသျော ဤကဲ့သို့ စောစောစီးစီး ရခြေိုးလိုကျပါမူ ထိုမကောငျးမှုမြားသညျ ကငျးစငျသှားလပွေီ”ဟု ပွောလသေညျ။
ထိုအခါ လမျးလှဲနသေော ပုဏ်ဏားကွီးအား မပွညျ့စုံသညျ သနားသှားမိပါသညျ။ မိမိနားလညျသိရှိထားသော တရားသဘောမြားကိုလညျး ပွောပွခငျြ၏။ ထို့ကွောငျ့ပငျ….
“ပုဏ်ဏားကွီး မကောငျးမှုကို ရဖွေငျ့ဆေးကွော၍ သနျ့စငျလြှငျ ငါး လိပျ မိကြောငျးတို့သညျ အမွဲ စငျကွယျ နရော၏။ သလြှေငျလညျး အကုနျနတျပွညျ ရောကျကုနျရာ၏”
“ပုဏ်ဏားကွီး အကုသိုလျကို ရဖွေငျ့ ဆေးကွော၍ ရရိုးမှနျလြှငျ ရဆေေးစဉျ ကုသိုလျတရားတို့လညျး ရဖွေငျ့သာ မြှောပါသှားကုနျရာ၏”
“ပုဏ်ဏားကွီး သငျသညျ မကောငျးမှုကို ကွောကျသဖွငျ့ နစေ့ဉျရခြေိုး၏။ အမှနျအားဖွငျ့ ထိုမကောငျးမှုသညျ အကြိုးမပေးပဲ မနေ။ အကြိုးတဖနျပေးလာပွနျမှု ဆငျးရဲရ၏။ အို…ပုဏ်ဏားကွီး မကောငျးမှုကို ကွောကျလြှငျ မကောငျးမှုကို မပွုဘဲနရော၏” ဟု သဘာဝကကြ ပွောလိုကျသညျ။
ပုဏ်ဏားကွီးသညျ မကောငျးမှု၏ စငျကွယျပုံ လှတျမွောကျရပုံကို သဘာဝကကြ ပွောပွသော သူမအား အထငျကွီး လေးစားသှား၏။ ထို့ကွောငျ့ အပျေါရုံအဝတျလှာတဈခုကို ပေး၏။ ကြှနျတဈယောကျအဖို့ အဖိုးတနျအဝတျအစားသညျ မကျမောစရာပငျ။ သို့သျော မပွညျ့စုံက ငွငျးပယျမှုကို ပွုခဲ့၏။ ပုဏ်ဏားကွီးသညျ လေးစားသထကျ ပို၍ လေးစားသှား၏။
ပွီးတော့ မပွညျ့စုံက “ပုဏ်ဏားကွီး မကောငျးမှုကို ကွောကျရိုးမှနျလြှငျ ကိုယျဖွငျ့လညျးကောငျး၊ နှုတျဖွငျ့ လညျးကောငျး၊ စိတျဖွငျ့လညျးကောငျး မကောငျးမှုကို မပွုရာ။ မကျြမှောကျ၌လညျးကောငျး မကျြကှယျ၌ လညျးကောငျး မကောငျးမှုကို မပွုရာ။ မကောငျးမှုမြားကို ယခုသျောလညျးကောငျး၊ နောငျသျောလညျးကောငျး ပွုနငွေားအံ့။ ထိုမကောငျးမှုမှ လှတျမွောကျမဟုတျပါ”ဟု ပွောဆိုလိုကျလေ၏။
ထိုအခါ ပုဏ်ဏားကွီးသညျ ဤမိနျးကလေးသညျပငျ ဤမြှတတျသိနားလညျနပေါမူ သူ့ဆရာကား ဆိုဖှယျရာ မရှိဟု တှေးဆကာ မွတျစှာဘုရားအား ကိုးကှယျဆညျးကပျလတေော့၏။ သရဏဂုံတညျကာ သီလတရားမြား ကို ဆောကျတညျကငျြ့သုံးသော ဥပသကာအဖွဈသို့ ရောကျရှိသှားလတေော့၏။
ထိုသတငျးသညျ သာဝတ်ထိ၌ ပွနျ့နှံ့သှားလတေော့၏။ နာမညျကြျော ပညာရှိ ပုဏ်ဏားကွီးအား အကငျြ့မှနျကနျ စအေောငျ ပွောဆိုဆုံးမလိုကျသော မပွညျ့စုံ၏ ဂုဏျကား အနာထပိဏျသူဌေး၏ နားသို့ပငျ ကွားသိခဲ့ရလေ၏။ အတိတျကောငျးနိမိတျကောငျးနှငျ့ မှေးဖှားလာသူ ဖွဈသညျနှငျ့အညီ မင်ျဂလာရှိသော အလုပျကို လုပျဆောငျ သှားသော မပွညျ့အား အနာထပိဏျသူဌေးသညျ ကြှနျအဖွဈမှ ကငျးလှတျခွငျးဟူသော ဆုလာဘျကို ပေးလိုကျ လေ၏။
သူ့ကြှနျအဖွဈမှ ကငျးလှတျခွငျးသညျ အတားအဆီး အပိတျအပငျ မရှိ။ သှားလိုက သှားနိုငျ၏။ လာလိုက လာနိုငျ၏။ ဘယျသူမှ ကွောကျစရာ မလိုတော့ပေ။ မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ သာသနာတျော၌ ကြှနျအား ရဟနျးပွု မပေးရဟု ဝိနညျးပညတျခကျြ ရှိလသေညျ။ အရှငျက ကြှနျအဖွဈမှ လှတျပေးသောအခါမှသာလြှငျ ရဟနျးပွုခှငျ့ ရရှိလေ၏။ ခဏမဆိုငျးပငျ နအေိမျ၌ သူဌေးကွီး နှငျ့တကှ အဖေ အမကေို နှုတျဆကျကာ ရဟနျးပွုရနျ သှားကာ ဆံကသော အလှကို ပယျစှနျ့ကာ ရဟနျးမအဖွဈသို့ ကူးပွောငျးလိုကျလတေော့၏။ တရားဘာဝနာကို ကွိုးစား ပှားမြား အားထုတျရာ မကွာမီပငျ အရဟတ်တဖိုလျသို့ ဆိုကျလတေော့၏။
ဝိပဿီမွတျစှာဘုရား၊ သိခီမွတျစှာဘုရား၊ ဝေဿဘူမွတျစှာဘုရား၊ ကကုသနျမွတျစှာဘုရား၊ ကောဏာ ဂုဏျမွတျစှာဘုရား၊ ကဿပမွတျစှာဘုရားတို့၏ သာသနာတျောတှငျ ရဟနျးမအဖွဈဖွငျ့ စာသငျစာခြ တရား ဟောခွငျးမြားကို လုပျ၍ ပါရမီဖွညျ့ခဲ့သော သူတဈယောကျဖွဈပါလကျြ သူမသညျ အဘယျ့ကွောငျ့ ဤကဲ့သို့ ဖွဈရပါသနညျး။ (ဂေါ၊က၊ကော၊က၊ဝေ၊သိ၊ဝိ) ဘုရားခုနှဈဆူတညျး။
ဂေါတမဘုရားရှငျ လကျထကျတျောတှငျ အာသဝေါကငျးကှာ ရဟန်တာဖွဈမညျ့သူ မှနျသျောလညျး သံသရာ ခရီးကို လြှောကျလှမျးခဲ့စဉျ အမှားလုပျခဲ့မိသောကွောငျ့ ကြှနျမဘဝသို့ ရောကျရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈပါသညျ။ သူ၏အမှားကား အခွားမဟုတျ။ မာနခကျထနျခွငျးတညျး။ မာနျမာန ခကျထနျသူမြားသညျ အမြိုးယုတျ၌ ဖွဈတတျလေ၏။ (ပုဏ်ဏာထရေီ ဝတ်ထု၊ ထရေီအပါဒါနျ) ref; အရှငျကောသလ၏ dhammadana website
အယူလှဲနသေညျ့ပဏ်ဍိတျ ပညာရှိကွီး၏ နှလုံးသားထဲအထိ ရောကျရှိစနေိုငျသညျ့ တရားစကားကို ကြှနျမလေး မပွညျ့က ပွောနိုငျခွငျးမှာ ဤဘဝတဈခုတညျး၏ ဆညျးပူးလလေ့ာခဲ့သညျ့ သတ်တိမဟုတျပေ။ ခွောကျဆူသော ဘုရားရှငျတို့၏ လကျထကျတျော အခါကာလက အဋ်ဌကထာဖှငျ့နိုငျလောကျသညျ့အထိ အထပျထပျ ထုံမှမျး လာခဲ့သညျ့ဉာဏျစှမျးရညျ၏သတ်တိ potential ပတေညျး။ ထို့ကွောငျ့ ဘဝခွားသျော လညျး ဖွဈတညျပကျြ နာမသန်တတိအစဉျ Mental process တှငျ အနန်တရ၊ သမနန်တရ၊ အာသဝေန၊ နာနာ က်ခဏိကကမ်မ ပစ်စညျးတို့၏ ကြေးဇူးပွုခွငျးကွောငျ့ potential energy သတ်တိ အဖွဈပါ ဝငျလာခွငျး ဖွဈပသေညျ။